Evidence of the cooperation and mutual praising of Hinayana Genocider Terrorists | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« မင်္ဂလာပါ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ ကြပါစေ
Myanmar Muslims need the UN, US and EU’s protection to continue supporting Daw Suu led NLD »
+လင်္ကာသားတို့ ချီးကျူးရသော မြန်မာတို့၏ဆရာတော်+
ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တ၀ိစိတ္တာဘိဝံသ (၀ီရသူ-မစိုးရိမ်)နှင့် မြန်မာမျိုးချစ်အကြမ်းမဖက် အဖွဲ့(၉၆၉)အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် သီရ်ိလင်္ကာရှိ သတင်းစာများ၊အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင် ချီးကျူး…ဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဘာပဲပြောပြော လင်္ကာရောက် ပညာတော်သင် မြန်မာရဟန်းတော်တပါးအနေဖြင့် များစွာဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
ထိုအပြင် သီရိလင်္ကာသတင်းစာ၏ ဖော်ပြချက်အရ ဆရာတော်ဦဝီရသူ နှင့်အဖွဲ့သည် မေလတွင် သာသနာရေးဆိုင်ရာ လေ့လာရေးနှင့် ဘုရားဖူးအစီအစဉ်အဖြစ် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ ကြွရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြထားသည်။
တည်းဟူသော ဖြတ်သုံးဖြတ်စနစ်ကို(No Halal )အဖွဲ့က ဦးဆောင်ကာ စည်းရုံးလှုပ်ရှားနေတာ အလွန် အောင်မြင်ထိရောက်လှပါသည်။
ထိုအကြောင်းကို `လင်္ကာ-မြန်မာ သိစရာ ´ဆိုပြီး ဆောင်းပါးသီးသန့်ရေးပါဦးမည်။
969 සංවිධානයේ නිර්මාතෘ “වීර තු” ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ එම සංවිධානයේ ඉහල පෙළේ සාමාජිකයන් පිරිසක් මැයි මස ලංකා ධරනීතලයට පා තැබීමට නියමිතය.
ලෝකය පුරා විවිධ රට වල සිදුවන මුස්ලිම් අන්තවාදී ක්‍රියාකාරකම් වලට එරෙහිව නැගී සිටීමට අදහස් කරන උන් වහන්සේ සිය ප්‍රථම සහෝදර සංවිධානය ලෙස මෙතෙක් කලක් අප්‍රකටව පැවති “අසිපත” සංවිධානය ලංකාවෙන් තෝරා ගෙන ඇත.
ලංකාවෙදී විශේෂ මෙහෙයුමක් මගින් සබැදියාව ඇරඹීමට අදහස් කරන උන්වහන්සේ අප රටේ ඔබ ගැන දැඩි විශ්වාසයකින් පසු වෙයි.
වැඩි දුර තොරතුරු ළඟදීම.
Tags: 969, Asia, Government, Liberation Tigers of Tamil Eelam, Sri Lanka, Tamil language, Tamil National Alliance, Tamil people, Travel and Tourism, Wira Thu
This entry was posted on April 14, 2013 at 11:42 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.